Social CRM သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ကြီးထွားမှုကိုလောင်စာဖြစ်စေသည် Martech Zone
Social CRM သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုလောင်စာဖြစ်စေသည်
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 19, 2012 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
Social CRM သည်အသုံးများသော၊ လူမှုရေးအသွင်အပြင်များရှိသောကုမ္ပဏီတိုင်းနီးပါးသည် Social CRM နယ်ပယ်တွင်သူတို့၏လျှောက်လွှာများကိုစတင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုလျှင်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းသည် ၄ ​​င်းကိုသူ့အား Social CRM ဟုမခေါ်မီတွင်ရှိရမည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - အချိန်နှင့်တပြေးညီလူမှုရေးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးသတိပေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဝင်ခွင့်လက်မှတ် - လူမှုရေးပရိုဖိုင်းတစ်ခု၏မှတ်ပုံတင်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလူမှုရေးပရိုဖိုင်းတစ်လျှောက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည် ဦး ဆောင်သူသို့မဟုတ်ဝယ်သူဟုတ်မဟုတ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်၎င်းကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ဗဟိုပြုမှတ်တမ်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Workflows - လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသေချာစေရန်စွမ်းရည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး - အမြတ်အစွန်းများနှင့်ဝယ်ယူမှုများအားမောင်းနှင်ရန်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတက်ကြွစွာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း။
သတင်းပို့ခြင်း - ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်အတွက်လူမှုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့် CRM များမှတဆင့်စုစုပေါင်းအစီရင်ခံနိုင်ခြင်းစွမ်းရည်။
Avectra လူမှု CRM လိုအပ်သောဒြပ်စင်အားလုံးရှိသည်နှင့်ပုံပေါ်ဒီ infographic ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည် လူမှုရေး CRM သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ကြီးထွားမှုကိုမည်သို့လောင်စာပေးသနည်း.
Tags: စေ့စပ်ထားခြင်းတိုးတက်မှုနှုန်းလူမှုရေးသတိပေးချက်များလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများလူမှုရေး CRMလူမှုရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလူမှုရေးတိုးတက်မှုလူမှုရေးမှတ်ပုံတင်လူမှုမီဒီယာအစီရင်ခံလူမှုစောင့်ကြည့်မှုလူမှုရေးအစီရင်ခံခြင်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာ
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကို Online မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
30:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 17
သတင်းကောင်း Mr. Karr! ငါလူမှုရေး crm ကုမ္ပဏီအပေါ်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ပို့စ်!